Thola ongakubona eWales, e-United Kingdom | Bezzia
Yini ongayibona eWales, e-United Kingdom
USusana Garcia | 24/03/2021 10:00 | Indlela yokuphila, travel
I-Wales iyingxenye ye-United Kingdom futhi ingenye yezingxenye ezinhle kakhulu esizibonayo. Ukuthatha uhambo ngale ndawo eseningizimu kuyinto ehlaba umxhwele, ngoba sithola izindawo ezinhle nezindawo ezinhle. Kuyaziwa ngokuba yizwe elinezinqaba eziningi, njengoba bekuyindawo evikeleke kakhulu, kepha futhi kunamadolobha amancane futhi athandekayo namathafa azosiphefumula.
Impela kufanelekile cabanga ngohambo oluya endaweni yaseWales, njengoba sizothandana nale ndawo. Isizwe esincane kunazo zonke e-United Kingdom kodwa lokho akunalutho lokufisa ezinye. Sizobona ezinye zezindawo eziyinhloko ukuvakashela eWales.
1 ICardiff, inhlokodolobha
2 ISwansea, idolobha lakhe lesibili
3 IConwy, idolobha elihle
4 I-Snowdonia National Park
5 ILlandudno, jabulela isitayela samaVictoria
ICardiff inhlokodolobha yaseWales ngakho-ke kumele ubone. Igqame ngesigodlo sayo esivela ngesikhathi sokubusa kwamaRoma yize sekulungiswe kaningi nezandiso kuwo wonke umlando. Okungafanele kuphuthelwe yiClock Tower ne-Animal Wall. Ngokulandelayo singavakashela indawo yaseCastillo, okuyindawo yayo edayisa kakhulu futhi enempilo. Okunye okufanele ukubonwe yiBute Park enhle, engelinye lamapaki amadolobha amakhulu ase-UK, atholakala eduze noMfula iTaff. Vakashela izindawo zemibukiso emidala iRoyal Arcade, indawo yokuthola izikhumbuzo nezinto zasendulo. Iyaqhubeka nokuvakashela iMakethe Ephakathi ukubona imikhiqizo ejwayelekile kanye neMnyuziyamu wayo Womlando.
ISwansea, idolobha lakhe lesibili
Leli yidolobha lesibili ngobukhulu futhi elibaluleke kunazo zonke eWales, okwenza kube enye indawo yokuvakashela. Isikhungo saso sakhiwa kabusha ngemuva kweMpi Yezwe Yesibili ngokuqhunyiswa kwamabhomu. Ungabona iCastle Square bese uvakashela i-Oxford Street, indawo yayo yezentengiselwano. Imakethe yayo enkulu nayo iyagqama, ngemikhiqizo ehamba phambili yokudla esiswini eWales. Kule ndawo kufanele udabule ichweba layo elihle bese udlula ngaseMumbles Lighthouse, indlu yayo yesibani edumile.
IConwy, idolobha elihle
EWales sinamadolobha amahle amahle, njengeConwy eNyakatho Wales. Idolobha elibiyelwe ngezindonga elimenyezelwe njengeGugu Lomhlaba. Igqama ngesigodlo sayo esihle sekhulu le-XNUMX lokho ngokungangabazeki okuzoheha ukunakwa kwethu futhi okusalondoloza ingxenye yodonga lwayo. Endlini ungabona indlu yePlas Mawr enezakhiwo ezinhle ze-Elizabethan. Futhi singavakashela indlu encane kunazo zonke ebukekayo eGreat Britain nasethekwini, enhle kakhulu.
I-Snowdonia National Park
Leli paki likazwelonke elihle elise- INorthwest Wales igcwele izintaba, izigodi, amachibi nezimpophoma. Indawo engamangazi nje kuphela uma sidlula kuyo, kepha yipharadesi lalabo abafuna ukuhamba izintaba maphakathi nemvelo. Kuleli paki kukhona iMount Snowdon, isiqongo esiphakeme kunazo zonke eNgilandi, kanye nezinye iziqongo eziphansi ezilungele abaqalayo ekukhuphukeni kwezintaba. Ngokomlando, esiqongweni sentaba kukhona i-ogre uRitha Gawr, owabulawa yi-King Arthur.
ILlandudno, jabulela isitayela samaVictoria
Leli ngelinye lamadolobha amahle eNyakatho Wales, indawo ebuye ibe yindawo enhle yamaholide e-United Kingdom. Kukhona ithilamu enkulu ekhuphukela phezulu edolobheni. Ukuba yindawo evakasha kangako siyazi ukuthi sizothola zonke izinhlobo zezinsizakalo, kusuka ezitolo kuya ezindaweni zokudlela, emahhotela nasemathilomu. Yaziwa ngohambo lwayo oluhle, kodwa futhi nangezakhiwo zesitayela sobuVictoria. Futhi, ngokusobala kwakulapha lapho uLewis Carroll ahlangana khona nomuntu omncane waseLondon owamkhuthaza ukuba adale u-Alice eWonderland '.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Yini ongayibona eWales, e-United Kingdom
Ukhilimu welanga ngaphambi noma ngemuva kokuthambisa
Iyini i-Houdini syndrome?